မည်သူမဆို.. မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မည်သူ့ကိုမှမဆဲရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » မည်သူမဆို.. မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မည်သူ့ကိုမှမဆဲရ
Posted by mg wine on Jun 9, 2012 in Letter to The Editor | 64 comments
အကြောင်း အရာ ။ ။ စာမူများကို တည်းဖြတ်စစ်ဆေးပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြ ခြင်း။
အထက်ပါ အကြောင်းရာ နှင့်ပတ်သက်၍ မန်းဂေဇက် သည် နာမည် ကြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာ ဖြစ်နေသည့် အားလျှော်စွာ လူကြည့်များသော လူကြိုက်များသော ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရာ ပိုစ့်များကို
ထုတ်လွှင့်ရာတွင် စစ်ဆေးပြီးမှ အတည်ပြု ထုတ်လွှင့်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ယခု အခါ သတင်းမှား များ သတင်းမှန်များရောထွေးအောင်ပြု မူသည်ဟု ဖတ်ရှု့ရသော သတင်းများကို သုံးသပ်ပြီး ရွာသား တစ်ဦးအနေဖြင့် တင်ပြမေတ္တာရပ်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား။
ရခိုင်သတင်းများတွင် အမှန်အမှား ရောထွေးနေခြင်း တစ်ချို့ သတင်းများသည် အကျိုး မဲ့ တိုက်ခိုက်ဆူပူစေလိုခြင်းတို့ကိုတွေ့ရပါသဖြင့် စီစစ်အတည်ပြု ပြီးမှ တင်ပေးပါရန် အနူး အညွတ် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့ရဲ့မူရင်းခေါင်းစဉ်က “သူကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ” ဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါကို လူဖတ်များအောင် စတစ်ကီလုပ်ပြီး “(မင်န်ဘာအသစ်များ ယနေ့ ပို့စ်အသစ်မတင်ရ) – မည်သူမဆို.. မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မည်သူ့ကိုမှမဆဲရ” အမည်နဲ့ပြောင်းထားပါတယ်။ လက်ငင်း အခြေအနေအရ လုပ်ထားရတာဖြစ်ပြီး.. မူရင်းပို့စ်ရေးသူ သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါကြောင်းနဲ့ နားလည်ပေးစေချင်ပါကြောင်း..။
မောင်မင်းကြီးသား အူးကိုင် တစ်ယောက်
ယနေ့ မှ စရွေ့ 
တွေ့ သမျှ့ ပျိုမဒီ အလကားကြည် ပါစေ ဗျား
သူကြီး ပြော တဲ့ အတိုင်းပါ ဘဲ။
မန်းလေးဂေဇက်က နာမည်ပျက်မှာကို တွေးပူပါ လို့ ပါ။
ဒီဆိုက်မှာတင်တာတွေက ဘယ်သူ့ဆီမှ မဖြတ်ဘဲ တောက်လျောက်တင်တာကိုးဗျ။
အဲတော့ သူကြီးက တည်းဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ မသင့်တော်ဘူးထင်ရင်တော့ သူကြီးက ဖျက်ပေးပါတယ်။
တော်ကြာ မန်းလေးဂေဇက်က အချောင်နာမည်ပျက်မှာကို တွေးပူပါတယ်။
ပိုရှုပ်ထွေးပြီး ဝေဝါးနေပါတယ်။မကြားဝံ့၊မနာသာ့တွေလဲ ကြားနေ
အရေးယူပေးဖို့ လဲ သံတွဲသားတစ်ယောက်၊ရခိုင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်
” သတင်းဖြစ်ဖြစ်.. ဘာဖြစ်ဖြစ်.. ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိ.. ဖျက်ပစ်ပါမယ် ”
စဉ်းစား ပါအုန်း ။
သတင်းဦး လေးတွေ မတက်ပဲနေဦးမယ်နော် ။
ဥပမာ ။ ။ လေးဝတီကြီး ကိစ္စက ၊
သတင်း ဦး ခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်နော် ။
ရွာသူား အသစ်တွေကို ၊
ပေးမတင် / ပေးမရေး တာမဟုတ်ပဲ ၊ ပေးတော့တင်ပြီး ၊
သူကြီး ဆင်ဆာ လွတ်မှ Web Page ပေါ် ပေးတက်ရင်ကော ။
အဲဒီ ကျက်သတုံးက ဘာသဘောနဲ့ တင်ပေးလဲ မသိဘူးလားဗျာ.
ူဆူးလေမှာ စန္ဒပြလို့ ကောင်းအောင် အဖွားကြီးကို သွားငိုပြလို့ ကောင်းအောင် လာဖွသွားတာ
အဲဒီသတောင်းစား အခု ရခိုင်ပြည် မီးရှို့ ခံရတော့ လာမတင်တော့ဘူးလေ.
ဟိုဖက်ကသတင်းဒီမှာတင်.. ပြီးတော့.. အပြန်အလှန်ဆဲကြဆိုကြနဲ့.. စိတ်ပိန်လို့ခင်ဗျ..
သတင်းအစစ်အမှန်ဆို.. ကျုပ်ကတဆင့် တင်ပေးလိုက်ပါမယ်..။
ပုံနှိပ်သတင်းစာထွက်ဖို့လုပ်နေတာ.. မအားတာနဲ့လေ… :?
” သတင်းအစစ်အမှန်ဆို.. ကျုပ်ကတဆင့် တင်ပေးလိုက်ပါမယ် ”
Thank you ပါ သူကြီး ။
အေးဝတီကြီးဆိုတဲ့ ဒေါ့ဂ်-ိုးမသား ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိဘူး..
စီနီယာတွေက.. တော်တော်ကြာကြာ ရေးခဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီမို့.. ဘယ်သူဘယ်သဘောနဲ့လည်း သိနေလို့.. သီးသန့်ခွင့်ပြုတာတွေပါပါတယ်..
အသစ်ဝင်လာတဲ့အထဲမှာ..တချို့က.. ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ.. ရေးနေတာတွေတွေ့ရတာမို့.. ကျုပ်လည်း အချိန်မအားတာမို့.. သိမ်းကြုံးရပ်ထားတာပါပဲ..
အနိစ္စ ဆိုတာက မမြဲခြင်း ..
စည်းကမ်း လိုက်နာတယ်ဆိုတာလည်း အမြဲ မရှိသလို ..
မလိုက်နာဘူးဆိုတာလည်း မမြဲမရှိပါဘူး …
ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ..
မည်သူမျှ မဆဲရ ဆိုတာလည်း အနိစ္စမို့ …
နောက်တော့ ဆဲလို့ ရလာမှာပါ ..
ဘာမှလည်း ဆိုင်ဘူး …
မသိချင်ရောင်ဆောင် .. အစား မသိချင်ယောင်ဆောင် လို့ သုံးသင့်ပါကြောင်း
ခင်ဗျားတို့ ဟာကလည်း သတင်းတင်ပေးတာလား .. အပြန်အလှန် စကားနိုင်လု နေကြတာလား ??? သတင်းတင်ပေးတယ်ဆိုရင်လည်း တင်ပေးတဲ့လူက ဘက်မလိုက်ပဲ သတင်းရေးစေ ချင်ပါတယ် . သမိုင်းရေးသလိုမျိုး ရေးစေချင်တယ် .. သတင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်ကိုမှ ဘက်မလိုက်ပဲ ကြားထဲကလူတစ်ဦး အနေနဲ့ ရေးပေးစေချင်တယ် ..
တစ်ဘက်ဘက်ကို ပါသွားတာနဲ့ (ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်ကုရတဲ့ ဆရာဝန်လို ) ဖြစ်သွားရင် မကောင်းဘူး .. အဲလိုဆိုရင် မရေးတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ..
သတင်းမှားတွေကို သတင်းမှန်နဲ့ ချေဖျက်ကြပါ…..။
သတင်းကို သတင်းအတိုင်းသာ တင်ပြီး သတင်းအတိုင်းသာ ဖတ်ရှု့သိမှတ်သုံးသပ်ကြစေချင်ပါတယ်….။
စိတ်အေးအေးထားပြီး တကွက်နှစ်ကွက်လောက် ကျော်ကြည့်ရင် သွေးထိုးမှု့တွေ လှုံ့ဆော်မှု့တွေကို တွေ့ရပါမယ်။
ဒါ ဘာသာရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး… ဘာသာရေးကိစ္စ အဖြစ်မခံကြပါနဲ့….
ဒါဟာ ဘာသာရေးမှ-လူမျိုးရေး > လူမျိုးရေးမှ-ဘာသာရေး အဆင့်ဆင့်နွယ်ပြီး ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အခု လူမျိုးရေး အဆင့် ရောက်နေပါပြီ…။
ဂေဇက်ထဲက ညီအကို တူ၊တူမတွေကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ဆဲဆိုတာလေးတွေ နဲနဲ ထိန်းပေးကြပါ…။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မိမယ့် စကားလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ဆင်ခြင်ပေးကြပါ။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ရင်ထဲမှာ ဆတ်ဆတ်ခါနေတာ…
လူ့လောကမှာတော့ သည်းခံရမယ့်ဟာလဲရှိတယ်။ သည်းမခံရမယ့်ဟာလည်းရှိတယ်။
ဒါကြောင့် သည်းခံကြပါ လို့ ကျုပ်မပြောဘူး……။
ကျုပ်တို့ရဲ့ သွေးသားညီအကိုတွေကို စောင့်ရှောက်ချင်ရင်
ကျုပ်တို့ရဲ့ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို စောင့်ရှောက်ချင်ရင်
လောလောဆယ်တော့ သတင်းမှားတွေကို သတင်းမှန်တွေနဲ့ပဲ ချေဖျက်ကြပါ…..။
(သူကြီးကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ဒီကွန်မင့်လေးကို ပိုစ့်အဖြစ်တင်ပါမယ်။ ထားနိုင်ရင်ထားပေးပါ..)
သများက ပို့စ် ၂၅ ပို့စ်တောင် ကျော်မယ်မထင်
အရီးလတ် မရေးရ .. ၂၃ ပိုစ်.. :grin:
ကိုသီဟရာဇာက ၂၅ ကျော် ရေးစေ .. ကျွတ်ကျွတ် သူကြီး ဆံပင်ဖြူပြီ..
သူကြီးရေ .. သတင်းနောက်ကျ မကျ အခုချိန်မှာတော့ အားလုံးက ဂေဇက်တစ်ခုထဲဝင်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။
သတင်းများ ပိုစ် အရည်အတွက် ဘယ်လောက်ရှိရှိ မရှိရှိ စိစစ်ပြီးမှ သာ တင်သင့်သည် ထင်ပါကြောင်း ။
အယ်ဒီတာ့အတွေ့အကြုံနဲ့.. ဆုံးဖြတ်ပြီး.. လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်လို့.. ပြောလိုရင်းပါ..
အရီးတော့ ပါးစပ် အကျယ်ချုပ် ခံရပြီ ..
သူကြီးတို့များနော် …. ။ အာဏာရှင် ပီသလိုက်တာ ..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတုန်း သင်သွားတာဖြစ်ရမယ် ..။
ဟီ ဟိ ….. ရန်တိုက်ပေးပြီးပြီ … လစ်မှ … အပ်ချလောင်း …
” အရီးလတ် မရေးရ .. ၂၃ ပိုစ်.. :grin: ”
ဟယ် ၊ သနားပါတယ် ။
ကျွန်တော်လည်းပါတယ် ….(၂၁) ပို.စ်
နောက်လေးပို.စ်လောက် တစ်ယောက်ယောက်ဆီကငှားချင်လိုက်တာ ……။
ပြောသာပြောနေတာ မကြာမီ အင်တာမဲကြီးတောင် ရပါ့ဦးမလားမသိ …
ကိုချောက သီချင်းနဲ့ပြောတော့ ကျနော်ကလဲ သီချင်းနဲ့ပြောမယ်
မေလှမြိုင်နဲ့ကိုမြကြီးတို့ရဲ့ ကန်သင်းဆယ်မှာလား ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထဲကစာသားပါ။
မှန်ပါ၏ ကြည့်နေလို့တော့မပြီးပါ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမကောင်းတော့ ရုံးက သူဌေးကလည်း ဘယ်ကိစ္စမဆို ဆဲ၊
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ On Line တက် (ထမင်းစားချိန်)၊ သတင်းဖတ်၊ အင်း…. အားလုံး on line မှာ ဆဲ၊
ဆဲသူတိုင်း ဒေါသ ကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ။
ကောင်းပါတယ်။ သတင်းဦးကို တက်စေခြင်ပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
သတင်းဆိုတာ မှန်ကန်တိကျမှ တင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မသိပဲ ဘယ်သူဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုပြီး တက်လာတဲ့သတင်းတွေကျတော့ ဒီဆိုက်ကို အားပေးနေကြတဲ့သူတွေအမြင်မှာ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ဆိုက်အဖြစ် မြင်သွားမှာမလိုလားပါဘူး။ မှားတယ်မှန်တယ်ကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရဲရမယ်ဆိုပေမယ့် တင်တဲ့သူတွေက ဘယ်ကနေ ဘယ်လို တင်နေသလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အရှုပ်အထွေးသတင်းတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ပိုစ့်တင်တဲ့သူတွေလည်း တင်သင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ခုက ဆိုက်က ရေးတဲ့သူများလာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သူဂျီးတစ်ယောက်ထဲ ရွာကို ထိန်းသိမ်းရတာ တကယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ နောက် တည်းဖြတ်ပြီးမှ တင်ဖို့ကျတော့လည်း အချိန်ကို တစ်ချိန်လုံး အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ရမှာဆိုတော့လည်း လွယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ သူဂျီးလည်း တစ်ခါတလေတော့ အိပ်ငိုက်တာတွေ ဘာတွေရှိချင်ရှိမှာပေါ့လေ တစ်ချိန်လုံး စောင့်ကြည့်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် မန်ဘာတွေက သတင်းတွေ တင်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိပြီး အမှားအမှန်ခွဲခြားပြီး တင်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်သား (လူပျော်) says:
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုသိခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ် ကျနော်ကရွာသားအသစ်လေးပါ MG ရွာထဲကိုမနေ့ကမှရောက်တာပါ
တိန်.. တို့တော့ခံရပြီ၊ကိုယ်တွေက junior တွေမှလား..၊ ဒါလည်းကောင်းပါတယ်… ရွာထဲမှာတည်ငြိမ်သွားတာပေ့ါ၊ အခုမှစပြီး..ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံခန်းလေးဖွင့်မယ်ကြံသေးတယ်…ဒီဘင်္ဂလီတွေ
အယ်မှားနေပီထင်တယ် ကိုရွှေထီးရေ ..
” ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပို့စ်” ကိုပဲ ပြောတာထင်ပါတယ်နော် …:P
ရွှာ ၀င် ၀ကဆိုင်းဘုတ်ဖတ်ပြီး ရွာ ထဲ အလည်လာခဲ့တာ ရွာထဲ ကလူတွေဆဲကြ ရိုက် ကြ အတင်းပြောဂုန်းချော ကြနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ် နေတော့ စိတ် ညစ်စရာကြီး ဖြစ်နေတယ်ပြန် တော့ မလို့သကြီး မင်းအလာစောသွားလို့ ။ ကျေးဇူး ကြီးလှပါတယ်သကြီး ခင်ဗျား ။
သတင်း ဆိုပြီး ပွဲဆူအာင်လုပ်နေလို့ သူကြီး စီစစ်စေချင်တာပါ ခုဟာက ၂၅ ပုဒ်မှ ဆိုတော့
တခြားဆိုက်တွေမှာလည်း စီစစ်ပြီးမှ စစ်ဆေးပြီးမှ တင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာ ရေးထားတာက ဂနေ့ အတွက် ရေးထားတာပါ …
သဂျီးအဆိုအရတော့ ဒီရက်ပိုင်းပေါ့ဗျာ ..
နောက်တော့လည်း ရခိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကိုပဲ ပြောတာပါ ..
ကျန်တဲ့ ပို့စ်တွေ တင်လို့ရပါရဲ့ဗျာ ….
ဒါကြောင့် မောင်ဝိုင်းလည်း ရပ်စရာမလိုပါဘူး …
ဆက်သာ လည်ပေတော့ .. ပို့စ် တင်ပါ ..
သဂျီး မကြိုက်ရင် ဖျက်လိမ့်မယ် … ကြိုက်ရင် လက်ခံလိမ့်မယ် …
ဒါက သဂျီးအလုပ် … ကျုပ်တို့အလုပ်က တင်ပို့ …
မပြန်ပါနဲ့ ကိုကိုဒေဝ ၊ ကော်ဖီလေးသောက်သွားပါဦး ၊
တခါတလေ လည်း တိုက်ခိုက်သံလေးတွေနဲ့ ပွဲစည်တာကောင်းသလိုလို ၊
ငါတော့ တစ်ပုဒ်ထဲ ကပ်လိုပြီး ဆဲလို့ အဲလေ တင်လို့မရဒေါ့ဘူး
ဂျီးဒေါ်က ဆဲမယ်ဆိုပါစို့ ..
ဘယ်လို ဆဲမှာတုန်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားသွားလို့ မေးကြည့်ဒါ ..
အနော့်ကို ကြောကြရင် ..
ခုချက်ချင်း စားချင်ဒါ အကုန်ဝယ်ကျွေးပစ်လိုက်မယ် ….
တစ်ခုဒေါ့ ပြောမယ်နော် ..
သူကြီး ဆိုတာ ရိုသေရတယ်နော့ …
(တော်ကြာ နာ့ကို ကြောကြနေမှ တကယ် ဝယ်ကျွေးနေရမှာစိုးလို့ …)
ဒီကြောင်(MGကြောင်အုပ်စုမဟုတ်ပါ ) ကို အ၀င်ခံတဲ့ သူတွေကိုဆဲချင်တာ…
အခုတော့ ရခိုင်ကို ကာဖျူးထုတ်ပြီး စစ်တပ်လက်ထဲ ၀ကွက်အပ်လိုက်ရပြီ..
အင်းဒီလိုနဲ့ပဲ လွတ်တော်က စစ်တပ်ကို ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ…
ဒီပြည်သူတွေနဲ့ တန်တဲ့ ဒီအစိုးရဆိုတဲ့ စကားတွေ…..
အင်း… စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး…. ;(
ပည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂
GUYS! IS THAT WHAT YOU REALLY WANTS?
တော်ပါသေးရဲ့ … ကျုပ်တော့ မော်ဒရေးရှင်းနဲ့ ကပ်အောင်တယ် …
ဒါလဲလေ ရခိုင့်အရေးအခင်း ပို့စ် တင်ရဲဘူးဗျို့…
ကျုပ်တို့ သံတွဲမြို့ ကနေ လှမ်းကြည့်လို့လဲ မြင်ရတာလဲ မဟုတ်လေတော့….။
ထောက်ခံပါတယ်သဂျီး။ ဘာတွေမှန်းမသိပဲ အသစ်တွေက နိုင်ငံဆူမဲ့ပိုစ့်တွေတင်တင်နေတာ။ ကြာရင် ရွာနာမည်ပျက်မှာတောင်စိုးရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ … အသစ်တွေက လက်စောင်းထက်လွန်းလှတယ်…
ဖြူဖြူမဲမဲ အကုန်ဆွဲ နေကြတာ….
အမှားအမှန် ဝေခွဲလို့ မရနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ…..။
TNA နဲ့Gip တို့ လို သူတွေ တွေ့ ရလို့ စ်ိတ် ချမ်း သာပါတယ် ။ ညီလေး ဘု တိုက် တဲ့ ကော်ဖီ သောက်လိုက်ဦးမယ်။
ကျုပ်ကိုလဲ မြည်းစမ်းခွင့်ပေးပါဦး ၊ သိပ်ချိုလွန်းရင် ဆီးချို ဖြစ်မယ်နော ။
အချိုပေါ့ဆိုရင် ကျုပ်ကိုလဲ တိုက် ။
ကျုပ်ကတော့ အခုမှ ပိုစ့်၆ပုဒ်ဘဲ တင်နိူင်တော့ အနေသာကြီးရယ်
ဒါနဲ့ သတင်းဆိုလို့ ကျုပ်ပတ်ဝင်းကျင်က ဖြစ်နေတာတွေ နေ့တိုင်း သတင်းတင်ရရင်ဖြင့် တနေ့ အပုဒ်၂၀လောက် ရမယ်ထင်ရဲ့
အဖြူအမည်းရေး သတင်း၊ အညှီအဟောက်သတင်း၊ တလိတဆန်သတင်း၊ အစုံပေါ့ဗျာ ကြာရင် CNNတို့ CCTVတို့ကတောင် ကော်မရှင်တွေ ရကောင်းရဲ့ ဒါပေသိ ကျုပ်တို့က စာဖတ်ခြင်လို့ ဒီဆိုဒ်ကို လာတာ သတင်းဖတ်ခြင်ရင်တော့ တခြားသွားရဲ့ဗျာ
ဒီမှာ ကြုံလို့ ဆဲတာလေး ပြောခြင်ရဲ့ ကျုပ်လည်း တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပေါက်လွတ်ပဲစား စိတ်ဓာတ်လေးရှိရဲ့ ခုတော့လည်း ဒိစိတ်လေးပြင်ပြီး စာကောင်း ကွန်းမင့်ကောင်းလေးဘဲ ရေးပါတော့မယ်။ ဒါပေသိ စည်းကမ်းက ထုတ်ပီးသားဆိုတော့ မရေးတော့ပါဘူး
ဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်ရော သဂျီးမင်းတြား မိန့်တာ ဖတ်ပီးသကာလ ကျုပ်တို့ဆီက သူတွေက ဒီလိုခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ထိန်းရုံဖြင့် မရပေါင် လက်တစ်လုံးခြား နည်းတွေက လွှတ်ကျွမ်းတာ။ ဒီတော့ စည်းကမ်းထုတ်ရင်ဖြင့် လိုတိုးပိုလျော့ လုပ်မနေပါနဲ့ တိတိကျကျသာလုပ် ဒီလိုမမဟုတ် ဒို့သဂျီး တရက်၄၈နာရီလောက် ထိုင်ပီးကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ လည်းတစ်မျိုးပေါ့ ……………..
အဲခါ ကျတော့လည်း လူတန်းစားခွဲပါတယ်ဆိုပီး ကျုပ်တို့လို ပေါက်လွတ်ပဲစား ဂိုဏ်းတူညီအစ်ကိုတွေက တွေ့သမျှ ပိုစ့်ဝင်ဆဲကြတော့မှာ…
စိတ်ရှုပ်ပါတယ် ပိုစ့်တင်မရတော့ဒဲ့ အတူတူ ကွန်းမင့်တွေဘဲ အရှည်ကြီးရေးတော့မယ် ဟိုခြောက်မျက်နှာ အဆိုကို ထောက်ခံတာပေါ့
အဲလိုပြောမှ ရခိုင်ပြည်သတင်းတွေ ပိုစ့်မတက်ဘဲ ကွန်းမင့်တွေထဲ ရေးလာရင်တော့ မသိ သဂျီးပြောသလို သူများနဲ့မတူအောင်ဆိုပီး…. အဟေး ဟေး
ဒါနဲ့ ကျုပ်ကလည်း အသစ်ဆိုတော့ ဒီဆိုဒ်ရဲ့ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီလေး သိခြင်တော့ ဟိုးရှေးက တင်တာတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း နောက်တင်တာတွေနဲ့ ဝေးရင်း ကိုယ့်ဘာသာ ဒေါသတွေထွက် မမြင်ရပါဘူးလေ ဆိုပီး ၀င်ဆဲမိ သံသရာလည်နေတော့တာဘဲ အခုလည်း မျက်နှာစာအုပ်ဘက် သွားဆဲလိုက်ဦးမယ်…..
ရွာအတွင်းရှိ အစွမ်းစ ရှိသူများသို့ ……
ကျွန်တော် က ရခိုင်အမျိုးသား တယောက်မဟုတ်ပေမယ့်
မြန်မာတိုင်းရင်းသား တယောက်အနေနဲ့ သူကြီးဦးစီး၍
ရွာမှ့ သြဇာတိက္ကမရှိသူများ ဦးစီးပြီးသကာလ
သမ်မတ ကြီးထံသို့ တင်ပြပေးပါရန် အလေးအနက်
ဆိုတာနဲ့ ဘယ် website ကသတင်းထူးလည်း ဘယ် blog ကသတင်းဦးလည်းဆိုပြီးဖတ်ကျတာ။
ပို့စ်၂၅နဲ့အထက်ရေးပြီးသားမန်ဘာ(ရွာသူသားတွေ)ကိုပဲ.. ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တင်ခွင့်ပေးမယ်..
အဲဒါတွေတင်လာရင်.. သတင်းဖြစ်ဖြစ်.. ဘာဖြစ်ဖြစ်.. ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိ.. ဖျက်ပစ်ပါမယ်..ဒဂျီး
ဒီထဲမှာရှိတဲ့ မန်ဘာဝင်တွေရဲ့သတင်းထူးတာနဲ့ တင်တာလေးတွေကြောင့် Mandalay gazette နာမည်
ကောင်းရသလို..မန်ဘာဝင်တွေရဲ့ သတင်းဦးသတင်းထူးတာလည်း အရေးကြီးဆုံးဘဲ။
The term Bosnian Genocide refers to either the genocide committed by Bosnian Serb forces in Srebrenica in 1995 or the ethnic cleansing campaign that took …
လူမျိုးတမျိုးမျိုးက.. တခြားလူမျိုးတမျိုးမျိုးကို.. ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ(ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ) မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိပါ..။
တကယ်လို့ဒါက ဖြစ်ခဲ့တယ်.. ဆိုရင်… ကမ္ဘာ့တရားဥပဒေအရ အရေးယူခံရပါလိမ့်မယ်..
ဒို့ရွာသူားတွေ.. မျိုးဖြုတ်သတ်ပစ်(Genocide) ဆိုတဲ့.. စကားမပြောကြဖို့.. စာမရေးကြဖို့.. ကော်မန့်မချကြဖို့… လူသားစည်းကမ်းလိုက်နာကြဖို့.. ဖြစ်ပါကြောင်း…
ဟုတ်ပါဒယ်.. သဂျီးမင်း… ကိုရင်တို့ ရွာသူားဟောင်းတွေကတော့
ရိုဟင်ဂျာမပြောနဲ့ ကိုယ့်ကို သွေးစုပ်တဲ့ ခြင်တောင် တခါမှ အမျိုးဖြုတ်ဖို့
အခုလေးဒင် သတင်းတစ်ခုတပ်လာပါတယ်။ သဂျီးမင်းရေ..
အနော်တို့ကတော့ မျိုးမဖြုတ်ပါဘူး.. သူရို့က တို့အမျိုးလာဖြုတ်ရင်ကော
ဒီအတိုင်းလေး မအော်ပဲ ငြိမ်နေရတော့မှာလားဟင်…
ဒီည ရှစ်နာရီကျရင် နိုင်ငံတောင်သမဒကြီးက မိန်းခွန်းဟောပြောမယ်တဲ့။
ညကျ မိန့်ခွန်းထဲ့မှာ ဒို့သဂျီးပြောဒဲ့ လူသားစည်းကမ်းနဲ့ မျိုးဖြုတ်သတ်ပစ်(Genocide) တွေ
တော်သင့်ရုံဆိုရင် ရပ်တန့် သင့်ပါပီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမှာ
နာမည်ကြီး ဟစ်တလာတောင် အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့တာ။ခုကိစ္စမှာ အတော်အချိန်ယူ
စိတ်တော့ အတော်ဆင်းရဲပါ၏။တသက်နဲ့ တကိုယ်ဗျာ မကြားဖူးတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု
တွေကြားရ၊ညမထွက်ရအမိန့် (ပုဒ်မ-၁၄၄)တွေကြားရ၊ထုတ်ပြန်ထားရနဲ့ ဗျာ။ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟုတ်ပါဘီ သူဂျီးရယ် သူဂျီးပြောတဲ့ကမ္ဘာ့တရားဥပဒေဆုတာကို ကိုယ်တွေက
လိုက်နာဘီထားပါဦး။သူဂျီးပြောသလို(Genocide) မလုပ်ပါဝူး ကိုယ်တွေဘက်က
သူကြီးက မတရားဘူး အေးဝတီကြီးကျတင်လို့ရတယ် တင်တဲ့ ကျုပ်တို့လဲ ရွာသားအဟောင်းထဲပါတဲ့ မန်းဂေဇက်ချစ်တဲ့ မန်းသားစစ်စစ်တွေပါဗျ မရေးရလို့တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး ကိုယ်က ကိုယ်သိတာလေး မျှဝေပေးတဲ့သဘောပဲလေ
ကဲကိုအေးဝတီကြီးတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာ ခင်ဗျားအမျိုးတွေ ကျုပ်တို့အမျိုးရခိုင်တွေကို မီးရှို့နေတဲ့ပုံတွေ အကြမ်းဖက်နေတဲ့ပုံတွေ တင်တော့လေ လင့်ခ်တွေမသိလို့လား ဘာလဲစောင့်ကြည့်တယ် ဆိုတာ ကျုပ်တို့မြန်မာဘက်က ပြန်ပြီးလုပ်တာကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေခံရတာကို စောင့် ကြည့်နေတာလား အဲဒီကုလားတွေခံရတာကိုဝါဒါဖြန့်ချင်တာလား မင်းဝါဒဖြန့်ကုလားဆိုတာသိပ်သိသာတယ်
ဆဲကြပါစေဗျာ၊ စာလည်းမတတ်၊ ပေလည်းမတတ်၊ မိလည်းမဆုံးမ၊ ဖလည်းမဆုံးမ လေးတွေမို့ပါ။
ဒီအိုင်ဒီယာကောင်းပါတယ် … ။
မန်ဘာဝင်လို့လည်း လွယ် ၊ ပို့စ်တင်လို့လည်း လွယ်တော့ … တင်ချင်တာတင်ပြီး ၀ါဒဖြန့်သူတွေ ခုတုံးလုပ်တဲ့ နေရာတစ်ခုလို ၊ အသုံးချခံနေရတာ …. ။ အချိန်မှီသာ မထိန်းချုပ်လျှင် … ရေစုန်မျောရတော့မယ့်ကိန်းမို့ … ဒီအကြံကို ထောက်ခံအားပေးလိုက်ပါတယ် ။
သင့်ကြောင့် ………မသာပုံများ Internet ပေါ်မတက်ပါစေနှင့်။ ကျေးဇူးပါ။